The Irrawaddy's Blog: ထိုင်းပညာရှင်တဦးရဲ့ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု သုံးသပ်ချက်
ထိုင်းပညာရှင်တဦးရဲ့ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု သုံးသပ်ချက်
ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ASTV မှာ ထိုင်းပညာရှင် မစ္စတာ ချပ်ချဝန် ချပ်စူထီချိုင်း( Mr. Chachawan Chartsuthichai) ရဲ့ သုံးသပ် ဆွေးနွေးချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည် သွားရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လိပ်ကျွန်းက စွပ်စွဲခံ မြန်မာများနဲ့ပါတ်သက်ပြီး မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့ထိုင်းမီဒီယာများက အသေးစိတ် ကို စုံစမ်းလို့ မရသေးပါဖူး ။
နိုင်ငံတကာက လူသတ်မှုကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အချိန်မှာ သွားရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ AFP သတင်း များ အရ သမ္မတ သိန်းစိန် အနေနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကို အမှု နဲ့ပါတ်သက်ပြီး သန့် ရှင်းပြီး အခွင့်အရေး များနဲ့အညီ ဆောင်ရွတ်ဖို့ ပန်ကြားခဲ့ပြီး အြ ပစ်ရှိရင်လဲ ထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေများအရ အရေးယူဖို့ပြောခဲ့ ပါတယ် ။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် က ဒီအမှုကို အထူးပြစ်မှု အနေနဲ့ခံယူထားပြီး လုပ်ကိုင်နေပါတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ် ။ ဒီသတင်းကို ထိုင်းနိုင်ငံက ကြိုတင် သတင်းရခဲ့ပြီး မျက်နှာဖုံး သတင်း အနေနဲ့ရေးသားခဲ့ကြပါတယ ။
မနေ့အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ ၁၆ မိနစ် ထိုင်းလေယာဉ်ကွင်း ရောက်တဲ့ အခါ ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်က လူသတ်မှုနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပြင်ပက အကူအညီပေးတဲ့ အနေနဲ့စုံစမ်းနေတာတွေကို ရပ်ဆိုင်း ကြပြီး ထိုင်း ရဲ တပ်ဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို စောင့်ဆိုင်းကြဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။
ထိုင်းမီဒီယာတွေက လူသတ်မှုဝန်ခံ တဲ့ သူတွေက နှိပ်စက် ရိုက်နှက် လို့ ဝန်ခံကြတာ ဖြစ်တယ် လို့ပြော ကြတဲ့ အခါ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ထိုင်းဥပဒေနဲ့ အညီ ဆောင်ရွတ်နေတာ ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်က ရလာတဲ့ သတင်းတွေကို ယူလာပြီး ဘာကြောင့် ယူလာပြီးမေးနေကြတာလဲ ။
ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ငြင်းခုံရန်ဖြစ်နေတာ အားမရလို့ပြင်ပ နိုင်ငံတွေပါ နဲ့ ငြင်းခုံ ရန်ဖြစ် နေရ ရင် ထိုင်းနိုင်ငံ ကို ဘယ်လို ရပ်တည်ကြမလဲ ။
ထိုင်းအစိုးရ အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကို အစအစအရာရာ ပြန်လည်ပြုပြင်နေတဲ့ ချိန်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ မကောင်းဖူး လို့ ထိုင်းတွေက ပြောနေကြတယ် ။
ယနေ့ထိုင်းနိုင်ငံက တနိုင်ငံတည်း ရပ်တည် လို့ မရတဲ့ အခြေအနေမှာ တော်ကြပါတော့ ။ အကျိုးဆက် က ထိုင်းနိုင်ငံကို လာတဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေ နဲ့ထိုင်းထုတ်ကုန်တွေ အတွက် ပြသနာတွေ ဖြစ် လာနိုင် ပါ တယ် ။
အစိုးရ အဆက်ဆက်က ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကို အခုအစိုးရ လက်ထက်မှာ မှန်ကန်စွာ ဖြေရှင်းကြရင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လွတ်တော် အသစ်လည်း တည်ဆောက်ပြီးခဲ့ပါပြီ ။
မေးခွန်း == ဒီလို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က တောင်းဆို လိုက်တဲ့ အတွက် ထိုင်းပုလိပ်တွေ လူသတ်မှုကို အစားထိုးတဲ့ သံသယ ကို ဘယ်လို ဆက်ပြီး လေ့လာကြမလဲ ။
ဖြေ ==== ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ထိုင်းနိုင်ငံ အကျိုးအတွက် ပြောသွားကြတာပါ ။ လူသတ်မှု နဲ့ ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ အကျိုးဆက်က ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနာဂါတ် မကောင်းဖို့ဖြစ်လာနေတယ် ။
ဒီအပေါ်မှာ ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ မီဒီယာ တွေကို ဝန်ကြီးချုပ် အနေနဲ့အပြစ်ပြောလို့ မရပါဖူး ။ ပြဿနာ အစ ကို ပြန်ကြည့်ရင် ထိုင်းပုလိပ် တပ်ဖွဲ့ ရဲ့အမှားတွေကြောင့် စခဲ့တဲ့ ပြဿနာပါ ။. ထိုင်းပုလိပ် တပ်ဖွဲ့ က ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေ အချင်းချင်း တောင်မှ မှားတဲ့သူက မှန်နေပြီး မှန်တဲ့သူတွေ မှားအောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ် ။
ဝန်ကြီးချုပ် ကျောထောက် နောက်ခံထားတဲ့ ထိုင်း တပ်မတော်က ထိုင်းနိုင်ငံ ငြိမ်ဝပ် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်တာ ကို လူတွေက လူသတ်သမားတွေလို့စွပ်စွဲခဲ့ကြတာဘဲ ။ မြင်လား ။ ထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ထဲက ထိုင်း ဝန်ထမ်းတွေမှာ အကျင့်ဆိုးကြီး အမြစ်တွယ်နေပြီ။ အထူးသဖြင့် ပုလိပ်အမှုလိုက်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တရားရုံး ဆွဲ ချ တွေပေါ့ ။ ဒီလူတွေကို ဘယ်လိုမှ ယုံကြည်လို့ မရတော့ဖူး ။
ထိုင်းလူမျိုး အချင်းချင်းတောင် ယုံကြည်ရတဲ့ အခြေအနေ မရှိတော့ဖူးဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံထက် အများကြီး တိုးတက်နေတဲ့ လူဖြူတိုင်းပြည်က လူတွေ သူတို့လူထုအတွက် ဘယ်လို ယုံတော့မလဲ ။
ထိုင်းလူမျိုးတွေ လုပ်ကိုင်နေတာ မှန်ကန်မှုရှိရဲ့ လား ။ ဒါကို မပြောကြနဲ့မရေးကြနဲ့လို့ဒီအတွက် ထိုင်းဝန်းကြီးချုပ် ပြောတာကို နားလည်ပါတယ် ။ လူကြီးက ဥာဏ်အမျှော်အမြင်နဲ့ပြောလိုက်တာပါ .
ကမ္ဘာကြီးက အဲဒီလို အခြေအနေ မဟုတ်တော့ပါဖူး ။ ကမ္ဘာကြီးက စူးစမ်းတဲ့ လူသားအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ပါ အမေရိကန် ပုလိပ် က လူမည်းတယောက်ကို သေနတ်နဲ့ပစ်တာ တကမ္ဘာလုံးက စိတ်ဝင်စားပြီး မေမြန်း ကြ စုံစမ်းနဲ့သူတို့ လူဖြူတွေတောင် ဖြစ်နေသေးတာဘဲ ။
သတင်းဆိုတာ အဖြစ်မှန် နဲ့အမှန်တရား ပေါ်က အခြေခံတာ သေချာပါတယ် ။ ပုလိပ်တွေကလည်း လုပ်ထုံး လုပ်နည်း တွေနဲ့အဖြစ်မှန်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်တယ် ။ မီဒီယာတွေကို အပြစ်ပြောလို့ မရဖူး ။
ပုလိပ်က လူမှားပြီး ဖမ်းတယ် လို့ ယူဆ ထားတာကို ထိုင်းဝန်ချုပ်က မပြောကြနဲ့တားလို့ မရပါဖူး ။ မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တောင်းဆိုတာက ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို သေချာအောင် ပြန်စစ်ခိုင်းတာ ။
အင်္ဂလန်ကို ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် သွားတဲ့ ရှောင် ဆိုသူက ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့တယ် ။ ဇွဲကြိုးချပြီး သတ် ဖို့ ကြိုးစားခိုင်းကြတယ် ။ ဆို ပြောတာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မပြောဖူး ။ သူ့ အသက်အန္တ့ရာယ် ကင်းတဲ့ သူ့တိုင်းပြည်ရောက်မှ ပြောတာ ။
(ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် နေပြည်တော် ရှိနေတဲ့အချိန်) မနေ့ ကမှာ ရှောင်က ရေးလိုက်တာ ။ လူသတ်သမားကို သူမသိပါဖူး ။ သူသေသွားခဲ့ရင် အင်တပ်( Inn Touch ကလူတွေလို့ ပြောခဲ့တာပါ ။ ဦးနှောက် တဝက်
လောက်နဲ့လူတွေ တောင် မြန်မာတွေ သတ်တယ် လို့ မစဉ်းစားပါဖူး ။ ရှောင်က ဆက်ရေးထားတာက သူ့ အနေနဲ့ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဖူး ။
ဒီပြဿနာတွေဟာ လူသတ်သမားတွေ လိမ်ညာပြီး စတင်ဖန်တီးကြတဲ့ ပြဿနာဖြစ်ပါတယ် ။ ရှောင် ကို လူသတ်သမားတွေက လူသတ်တရားခံ အဖြစ် အစားထိုး စွပ်စွဲဖို့ကြိုးစား ခဲ့သေးရင် ပြေးတဲ့ မြန်မာလည်း အစားထိုး ခံရမှာပေါ့ ။
ရှောင် ကံကောင်းသွားတာက ကူညီသူ သတင်းထောက် ခေါ်ပြီး ရဲစခန်းကို ရောက်အောင် သွားပြီး တိုင် ကြားနိုင်ခဲ့တာပါ ။
ဒေးဗစ် သူငယ်ချင်း ကို စစ်တော့လည်းသွေးစွန်းနေတဲ့ ဘောင်းဘီ တွေတယ် ။ ဒီဘောင်းဘီဘယ်က ရတာ လဲ ။
( မီဒီယာပြောချင်တာ နားမလည် ဖူး) တကယ်တန်း ထုံးတမ်းစဉ်လာ လုပ်ရမှာက ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကြည့်ဖူးနေ ကြတာဘဲ ။ အချင်းဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာတွေကို ကြိုးတွေ တန်းပြီး တာဝန်ရှိသူမှ အပ ဘယ်သူမှ မဝင်ရဖူး ။
ပြီးတော့မှ ကျွမ်းကျင်သူတွေ နဲ့စနစ်တကျ သက်သေတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ရမှာလေ ။
အခုတော့ ပွေလီရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်နေကုန်ပြီ။ ဘယ်သူ လုပ်ခဲ့တာလဲ ။ ဝန်ကြီးချုပ် ယုံကြည်တဲ့ ထိုင်း ပုလိပ် ဘဲ။
အကယ်လို့ လူသတ်သမား အစစ်ကို ဖမ်းမိရင်တောင် လိုအပ်တဲ့ သက်သေ အထောက်အထားအတွက် အခက်အခဲ ရှိတယ် ။
မှုခင်းဆရာဝန်မကြီး ပြောခဲ့တာဘဲ ပုလိပ် ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် မဟုတ်ပါဖူး ။ လူသတ်သမား အစစ် ကို မဖမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ပုလိပ်က အစားထိုး လို့ မရဖူးနော် ။ အဲဒါလည်း အပြစ် ဖြစ်တယ် ။ ထိုင်းပုလိပ်တွေ ဒါမျိုးလုပ်တဲ့ အမှုတွေ အများကြီး ဖြစ်ခဲ့တယ် ။
တခါက သခဲ အမှုမှာ သံသယ ရှိသူ ၅ ယောက်လောက်ဖမ်းပြီး စစ်ဆေးတာ တယောက်က အချုပ်ထဲမှာ
သေသွားတယ် ။ လင်မယားတွေလည်း ကွဲကုန်တယ် ။ နောက်ပိုင်းတော်တော် ကြာမှ အမှုမှန် ပေါ်လာ
တော့ သံသယရှိသူတွေ အားလုံး သေကုန်ပြီ ။
ပုလိပ်က သက်သေခံမဲ့သူ အတုတွေကို ဘတ် ၅၀၀ ပေးပြိး သက်သေခံ ခိုင်းတယ် ။ ဘယ်သူမှ စုံစမ်းမယ့် သူ မရှိဖူး ။ တရားရုံးက တရားသူကြီးတွေ လည်း မသိလိုက်ဖူး ။
အခု ဒီလူသတ်မှုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသား ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဘယ်သူမှ သိလိုက်မှာ မဟုတ်ဖူး ။ တရားခံကို
မီဒီယာတွေ အနေနဲ့လူသတ်သမား ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိဖို့သူတို့အလုပ်မဟုတ်ပါဖူး ။ ဝန်ကြီးချုပ်
ပြောတာ မှန်ပါတယ် ။ အမှုစစ်ပုလိပ် အလုပ်ပါ ။
အကယ်လို့မှားဖမ်းခဲ့တယ် ဆိုရင် ပြန်လွှတ် ။ နောက်လူသစ် ပြန်ဖမ်း လို့ မရဖူး ။ ဒီအခြေအနေ က ထောက်လှမ်းရေးက သတင်းစုံစမ်း တဲ့ အခြေအနေပါ ။
ဒီကနေ့မြန်မာပြည်က အရင်ကလို မြန်မာပြည်သားကို မျက်နှာလွဲ ခဲပစ် လုပ်လို့မရတော့ဖူး ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြဿနာ ရှာမှာ သေချာတယ် ။ မြန်မာပြည် ပြောင်းလဲ သွားပြီ ။
ဒီအတွက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ထိုင်းမီဒီယာတွေကို ငြိမ်ငြိမ် နေပါလို့ပြောလို့ မရတော့ဖူး ။ ဒီနေ့ ထိုင်ရပ် သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးမှာကြည့် သန့် ရှင်းစွာ မြန်မာတွေကို စုံစမ်း စစ်ဆေးဖို့ တောင်းဆို လို့ ရေးထားပါ တယ် ။
ထိုင်ရပ် သတင်းစာ က စုံစမ်းတဲ့ အခြေအနေကိုရေးတာ ။ စစ်ဆေးတာမှ မဟုတ်တာ ။ ဒီလို မရေးရင် ထိုင်ရပ် သတင်းစာ က အမှန်တရား ကို စုံစမ်းတဲ့ သတင်း မဟုတ်တော့ဖူး ။
ဝန်ကြီးချုပ်ကလဲ သူ့ အလုပ်သူလုပ်တာဘဲ ။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ် လုပ်ကြပေါ့ ။
ဒီမှာကြည့်လေ။ ရှောင်ရေး ထားတာ ။ ရှောင်က လူသတ်သမားကို သိတယ် ။ ဘာလို့ မပြောတာလဲ ။ ထိုင်းပုလိပ်ကလည်း ဘာလို့ရှောင်ကို မမေးတာလဲ ။ တွေ့ လား ထိုင်းပုလိပ်က ရှောင်ကို အကူအညီ
တောင်းပြီး သံသယ ရှိသူတွေကို မေးမြန်ရမှာ လေ ။ ထိုင်းပုလိပ်တွေ မလုပ်ဖူး ။
နယ်မြေခံပုလိပ်တွေက ရော ကူညီချင်စိတ် ရှိရဲ့ လား ။ လောလောဆယ်တော့ နယ်မြေခံ ပုလိပ်တွေ လုပ်လိုက်တာ အမှုက ရှုပ်ထွေးပြီး သက်သေခံ အထောက်အထားတွေ ပျောက်ကုန်ပြီ ။
အစားထိုး ဖို့ ကတော့ အရမ်းကို အဆင်ပြေတာပေါ့ ။ အထူးသဖြင့် ထိုင်းစကား မတတ်တဲ့ မြန်မာကို အစား ထိုးဖို့အဆင်ပြေတာပေါ့ ။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို ပြောချင်ပါတယ် ။ မီဒီယာက စုံစမ်းတာ ကို မကန့် ကွက်ပါနဲ့။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် လုပ်ရ မယ့် အလုပ်က ပြဿနာ စဖြစ်တဲ့ ပုလိပ်တွေကို အမိန့် ပေးရမှာက ဘယ်မှာလဲ သက်သေ အထောက် အထားတွေ ။
ဘယ်မှာလဲ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေ။ အခု ဖမ်းထားတဲ့ သံသယ ရှိသူတွေ သေချာတယ်ဆိုတာ အထောက် အထားတွေနဲ့ရှင်းကြစမ်း ။ အခုတော့ ရရှိထားတဲ့ သက်သေ အထောက်အထားတွေကို ချပြလို့ မရပါဖူး ဆိုတော့ လူထုက ရီတာပေါ့ ။
နောက် သက်သေ မောင်မောင် က မြန်မာသံရုံးက အဖွဲ့ ကို သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ သတ်တာ မမြင်ဖူး ။ သူ့အနေနဲ့ မယုံရဖူး ပြောလိုက်တာဘဲ ။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အနေနဲ့နဖူးပေါ် လက်တင်ပြီး ပြန်စဉ်းစားသင့်တယ် ။ မီဒီယာက သတင်းမှားတွေ ထုတ်ပြီး လူထု ကို ချပြနေတယ် ဆိုရင် ပုလိပ်တွေဆီက အထောက်အထား တွေနဲ့ရှင်းပြ သင့်တာပေါ့ ။ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တွေက သတင်းနားထောင်ရုံနဲ့သိပြီးသားပါ ။
လူသေတွေ စတွေ့ ထဲက ဖြောင့်မတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အားလုံးက တက်ညီလက်ညီ နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက် ကူညီကြမှာပေါ့ ။
သေသွားတဲ့ လူတွေက အင်္ဂလန်သားတွေ ။ သူတို့ မှာ စကော့တလန်စုံထောက်ဆိုတာ ရှိတယ် ။
ထိုင်းပုလိပ်က ဟို လူ့ ကို လွှဲချ ဒီလူ့ ကို အစားထိုး လို့ မရဖူး ။ အခု ဆိုရင် BBC world မှာ စပြီး ပြောနေပြီ ။ သူတို့ ကလူသတ်သမား အစစ် လိုချင်တာ ။ မြန်မာသမ္မတ သိန်းစိန်ကို သူ့ နိုင်ငံသားက တကယ် သတ် တယ် ဆိုရင် လုံလောက်တဲ့ အထောက်နဲ့ရှင်းပြနိုင်ရမှာပေါ့ ။
ထိုင်း အခြေစိုက် ASTV တွင် သုံးသပ်သွားတဲ့ Mr. Chachawan Chartsuthichai နဲ့ အင်တာဗျူးကို နယ်သာလန် နိုင်ငံနေ ကိုဌေးတင့်မှ ထိုင်းဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်လည် ဘာသာပြန်ထား
ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၄င်း၏ အာမခံချက်၊ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဧရာဝတီက ပြန်လည် ဖော်ပြသည်။
MingNyo said... :
ကြက်​ဥနှစ်​​ရောင်​ တိမ်​​တောင်​သဖွယ်​ မင်း​ရေးကြွယ်​ဧ။်​။